Egwuregwu Carbon Ceramic Tile Floating China Manufacturers & Suppliers & Factory
Egwuregwu Carbon Ceramic Tile Floating - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Egwuregwu Carbon Ceramic Tile Floating)
Ngwá Ngwá Agha Ngwá Agha Ngwá Agha Ngwá Agha Na-ekpo Ntụ
Nkọwapụta ngwaahịa Ngwongwo ndi na-ekpochapu ugbo bu PET nke kpochapu kpo oku nke infrared, o bu uzo di elu nke ihe eji kpo oku. Site na nnukwu ọnụego okpukpuchi, a na-ekpochapu ájá ájá ájá na nkeji ole na ole. Njiri nke radiation radra infrared, nwere ike ime ka ndị mmadụ nwee nkasi obi nke dị mma maka ahụ ike mmadụ....
Ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke carbon carbon
Anyị bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe bụ ọkachamara na-emepụta ihe ọkụkụ karịrị 21years, anyị nwere ezigbo mma na ọnụahịa kachasị mma Nkọwapụta ngwaahịa Ị na-atụle ịwụnye ala ụlọ kpụ ọkụ n'ọnụ n'ụlọ gị? Ọbụna ma ọ bụrụ na ị naghị ewu ụlọ ọhụrụ, ikekwe ị na-eche echiche ịgbakwunye ụlọ gị ụlọ ma ọ bụ ụlọ ahịa. Ọ bụrụ na...
Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu
Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Nkọwa: Okpokoro okpokoro osisi na-eme ka okpukpu osisi na okpukpu kporo osisi na-eto eto Ebe mgbanyụ ọkụ na-agbanye mgbatị dị mita 10 ruo 20 karịa okpomọkụ Na-eme ka ihe ịga nke ọma nke seedlings na cuttings, mmegide na-ewu, mmiri na-adịghị ọcha ma dị mfe...
Ihe na-agba chara chaa carbon
Ihe na-agba chara chaa carbon Ngwá ọrụ carbon carbon na-arụ ọrụ nke ọma na-eme ka mmiri ebili mmiri na-emepụta ikpo ọkụ na-enweghị ntụpọ ọkụ. Osisi carbon bụ ụzọ dị ike nke na-eme ka ike kpoo ya na enweghị wires nke nwere ike ịghọ pinched ma ọ bụ agbajikwa. Onye ọ bụla nwere nkwụnye nkwado ma nwee obere eletrik na...
Egwuregwu na-ekpo ọkụ maka anụ ọhịa na-ekpo ọkụ
Egwuregwu na-ekpo ọkụ maka anụ ọhịa na-ekpo ọkụ Nkọwapụta ngwaahịa Ngwá anyị na-ekpo ọkụ na-eme ka ihe ọkụkụ nke anụ ọkụ gị na-eme site n'ịkpọcha mkpụrụ na ebe obibi ha. Igwe ọkụ ọkụ a na-enye ọbụna, ikpo ọkụ ọkụ. Ezubere ihe ndị dị mma, a na-emezi ihe ọkụ ọkụ a ma kwadoro maka anu ulo ọ bụla. Ọdịdị nke okpukpu...
Nkịtị Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu
Nkịtị Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Nkọwapụta ngwaahịa Ihe mgbochi oku a bu ihe aturu maka ojiji ogwu. N'ihi na mmiri na-agba ọkụ. Ọdịdị nke okpomọkụ okpomọkụ nke okpukpu abụọ na ọrụ PTC na-enye ahụ ọkụ ọkụ. Anyị ga-achọ ịmepụta ngwaahịa anyị - ọrụ PTC. Kedu ihe bụ PTC? PTC pụtara nchịkwa onwe onye. Ọ...
Ụlọ Sauna Jiri Egwuregwu Ndị Na-ekpochapu na Ọrụ PTC
Ụlọ Sauna Jiri Egwuregwu Ndị Na-ekpochapu na Ọrụ PTC Nkọwa Nke mbụ, anyị ga-achọ ịmepụta nkà ọhụụ ọhụrụ nke PTC funcion. Kedu ihe bụ PTC? Igwe ihe omimi nke oma (PTC) bu ihe omuma ohuru ohuru nke gbanwere ulo oru oku. Ọ na-ekpo ọkụ ngwa ngwa, ya na usoro kpo oku nke na-achịkwa onwe ya, okpomọkụ na-achakwa edo...
Nkọwapụta ngwaahịa N'okpuru tankị na-ekpo ọkụ tank 8W na-emepụta ihe dị egwu n'okpuru tankị tank na British plug N'okpuru ebe a na-ekpo ọkụ ma ọ bụ kpo oku ọkụ, ọ bụ ụzọ dị mma iji nye "ọkụ ọkụ" maka ebe okpomọkụ na mbara igwe ma ọ bụ ọzara. Obere nkedo na-esi ike na-agbanye na ala nke mbara...
Egwuregwu Egwuregwu Ahụike Na-ahụ Maka Ahụike
Min. Nhazi: 1000 Square Meter
Nkọwapụta ngwaahịa Nke a kpo oku na mpe mpe akwa e mere maka ahụ ike na-elekọta usage.With anyị ọhụrụ technology nke anya infrared kpo oku film, ị pụrụ ịnụ ụtọ mma ịhụnanya na ahụike ahụ ọgwụ mgbe obula na ebe obula i choro. Umu ogwu ozo nke di ka anyanwu, nwere ike ime ka mgbasa ozi obara gi di ike, mee ka aru aru di...
Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwu
Nkọwapụta ngwaahịa Ihe kacha mma maka ihe ọkụkụ na-emepụta ihe ọkụkụ. Ezubere ya iji mee ka ọnọdụ okpomọkụ nke ebe a na-agbanyekwu ọkụ dịkwuo 10 ° C na 20 K n'elu igwe okpomọkụ nke ikuku, nke zuru oke maka ịgha mkpụrụ nke ime ụlọ, maka ka eto eto na mkpụrụ osisi germination .Ndị ihe na-adịghị mma, ọ dị mma iji....
Nkịta Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu
Nkọwapụta ngwaahịa BỤ BỤ ỤBỤRỤ BỤ ỤBỤCHỊ NA-ECHIKE: Na-enweghị ihe eji eme ihe. Ihe mgbochi oku na-achịkwa onwe ya bụ ihe dị iche iche maka nkasi obi na ntụrụndụ nke anụ ụlọ gị. Mgbanwe a dị mfe ma dị elu nke mpempe akwa gosipụtara okpomọkụ ịzụ anụ gị laghachi azụ ha. Enye obi Kasienụ n'ọrụ nọọsụ nwanyị na ụmụ...
Nkọwapụta ngwaahịa Mgbe oyi na-abịa, ị nwere ike ịchọ enyemaka dị ntakịrị iji mee ka aka gị dị ọkụ. Aka aka na-ekpo ọkụ-ngwaọrụ a na-etinye n'akpa uwe nke ọkụ eletrik na-eme ka ọ dị otú ahụ. Ọgụ aka anyị na -eji ihe nkiri kpụ ọkụ ọkụ na-emepụta ihe nke na-enye okpomọkụ kwa ụbọchị ma bụrụ ihe dị mma iji mee ka aka...
Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Electric
Nkọwapụta ngwaahịa Igwe ọkụ kpụ ọkụ n'ọnụ, nke a maara dị ka ihe ọkụkụ na-ekpo ọkụ, bụ ihe ọkụkụ na-ekpo ọkụ na kpo ọkụ. bụ ụzọ dị irè na a pụrụ ịdabere na ya iji nye okpomọkụ gị anụ ụlọ. Site na Teknụzụ Na-eme Ka Igwe Na-agbanwe Igwe (PTC), a na-eme ka ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ ngwa ngwa nke na -edozi ya, na-echekwa...
Egwuregwu Carbon Ceramic Tile Floating Egwuregwu Carbon Hem Mat Igwe Egwuregwu Carbon Fiber Egwuregwu Sauna Heat Film Egwuregwu Thermal Eletriki Egwuregwu Egwu Carbon Egwuregwu eletrik eletrik Egwuregwu Ngwongwo Eletriki